राष्ट्रिय गानको अपमान गर्ने यी हुन् नेपाली ३ कलाकार, सामाजिक सन्जालमा भाइरल !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
राष्ट्रिय गानको अपमान गर्ने यी हुन् नेपाली ३ कलाकार, सामाजिक सन्जालमा भाइरल !
काठमाडौं – ‘को बन्छ करोडपति ?’ नामक कार्यक्रममा अभिनेता राजेश हमालले राष्ट्रिय गानको अपमान गरेको भनेर आलोचना भएको छ ।
एउटा निजी टेलिभिजनबाट प्रशारित हुँदै आएको ‘को बन्छ करोडपति ?’ नामक कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रिय गान बजाइएको थियो । राष्ट्रिय गान बज्दा सबै उठ्नुपर्छ । तर, अभिनेता राजेश हमाल आफ्नो सिटमा बसेर राष्ट्रिय गान सुनिरहेका थिए ।
हमालसँगै अगाडिको सिटमा बसेका नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुशमान देशराज श्रेष्ठपनि कुर्सीमा बसेर राष्ट्रिय गान सुनेका थिए । राष्ट्रिय गान बज्दा उभिएर गीतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नै नरहेका भन्दै उनीहरूको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ ।
‘राष्ट्रिय गान गाउँदा उभिनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत रहेनछ’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भएका छन् । कार्यक्रममा अभिनेता हमालले नायिका प्रियंका कार्की र नायक आयुषमान देशराज श्रेष्ठसँग ‘राष्ट्रिय गानमा’ कति पटक नेपाल शब्द आउँछ’ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो ।
राष्ट्रिय गानमा प्रश्न बनाएर सोध्नु उचित भएपनि राष्ट्रिय गान बज्दा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अभिनेता र अभिनेत्रीहरूले ध्यान नदिनुलाई धेरैले आलोचना गरेका हुन् ।